Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Israel Na -agbasa Akụkọ » Israel na -arịọ maka enyemaka ka nnukwu ọkụ ọgbụgba na -enwu na mpụga Jerusalem
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Israel Na -agbasa Akụkọ • News • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ozi mba ofesi nke Israel kwuru na ọ gakwuuru ọtụtụ mba ndị ọzọ maka enyemaka, na -achọ nkwado ikuku ozugbo iji merie ọkụ ahụ.
Ọkụ na-enweghị nchịkwa bibiri oke ọhịa na ala ubi
Ọkụ ọgbụgba na -eyi obodo ndị dị nso egwu.
Ọkụ ahụ malitere na Sọnde ma enwebeghị ike ịchịkwa ya.
Ọkụ na-achịkwaghị achịkwa na-enwu na mpụga Jerusalem kpaliri gọọmentị Israel ịkpọ oku maka enyemaka mba ụwa.
Nnukwu ọkụ ọgbụgba ebibiela oke ọhịa na ala ubi, na -ere ala opekata mpe 4,200 (hectare 17,000) ma na -eyi egwu ugbu a n'ọtụtụ obodo nta dị nso.
Ihe dị ka ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ 75 na ụgbọ elu iri na -alụ ọgụ ọkụ dị nso Jerusalem na Mọnde, dịka ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ na nnapụta nke Israel siri kwuo. Ọkụ ahụ malitere otu ụbọchị tupu mgbe ahụ, a kabeghịkwa ike.
Ihe onyonyo si n'ala na -egosi oke ọkụ na -agba n'akụkụ okporo ụzọ, ebe ndị ọkwọ ụgbọala ga -ebugharị n'ime ọkụ.
A hụrụ obere ụgbọ elu ihe ọkụkụ ka ọ na-awụsa ogige na-acha odo odo na-egbu maramara n'ugwu ndị gbara Jerusalem gburugburu iji mee ka ọkụ kwụsị.
Ahapụla ọtụtụ obodo dị na mpaghara ahụ, gụnyere ụlọ dị n'obodo Givat Yearim, nke dị n'akụkụ ọdịda anyanwụ Jerusalem. Ihe onyonyo e mere ebe a na -egosi na ọkụ emetụla ụfọdụ ụlọ n'ime ebe ahụ.
Ọkụ ahụ na -eyikwa ụlọ ọgwụ kacha ukwuu na mba ahụ, Hadassah Medical Center, nke dị n'okporo ụzọ ọkụ ahụ. Ndị uwe ojii Jerusalem gwara ndị mgbasa ozi Israel na ha na ụlọ ọgwụ na -arụkọ ọrụ iji nyere ndị ọrụ aka ịkwadebe maka ịwepụ mmadụ. Ruo mgbede Mọnde, ndị uwe ojii gwara ụlọ ọrụ ahụ ka ọ malite ikpochapụ ebe a na -adọba ụgbọala iji mee ka ọpụpụ dịrị mfe, n'agbanyeghị na ekwuputabeghị.
IsraelOzi mba ofesi kwuru na ọ gakwuuru ọtụtụ mba ndị ọzọ maka enyemaka, na -achọ nkwado ikuku ozugbo iji merie ọkụ ahụ. Minista mba ofesi Gris Nikos Dendias gwara onye otu ya na Israel Yair Lapid obodo ahụ "ga -enyere aka dịka o nwere ike," ka ozi ahụ siri kwuo. Gris emeriela onwe ya nke ukwuu site n'ọkụ na-enwu ọkụ, ebe gọọmentị ya na-eche nkatọ ugboro ugboro maka nzaghachi steeti ahụ maka ọdachi ahụ.